ဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားလို့ ခံစားချက်တွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး…. – Cele Lover
ဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားလို့ ခံစားချက်တွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး….
ဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကိုကြား ကြားချင်းမှာ သူမခံစားလိုက်ရတဲ့ခံ စားချက်တွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး….
ပရိသတ်ကြီးရေထပ်ဆင့်အကယ်ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဖွေးဖွေးကိုတော့အထူးအထွေမိတ်ဆက် ပေးစရာမလိုအောင်ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..။ ဖွေးဖွေး ကတော့အနုပညာမှာတမူထူးခြားမှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ဖွေ းဖွေးက နိုင်ငံရေး ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ၅၀၅ (က) နဲ့ဝရမ်းထုတ်ခံရတာကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ ရတာပါ..။ မိသားစုနဲ့ ဝေး ရာမှာ ရောက်ရှိ နေရချိန် ဖွေးဖွေးရဲ့ အချစ်ဆုံး မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ အဖွားရဲ့ နာရေး သတင်းကစလို့ သြဂုတ်လ(၁၉) ရက် နေ့မှာလည်း ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရေး သတင်းဟာ ဖွေးဖွေး အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဖွယ် ဖြစ်စေမယ် ဆိုတာ အသေအချာပါပဲနော်..။
ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ သတင်းကြားပြီးနောက်မှာတော့ ဖွေးဖွေးက “My life will never be the same again. ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။သူမရဲ ဘဝက အရင်လိုမျိုး ထပ်တူညီတာမျိုး မရှိတော့ဘူး လို့ ဝမ်းနည်းစွာ ရေးတင်လာခဲ့တာပါ..။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မိသားစုနဲ့ ဝေးရာရောက်နေသူ ဖွေးဖွေးအတွက် အားပေးစကားတွေလဆိုပေးခဲ့ပါဦးနော်..။
ဖခင္ျဖစ္သူကြယ္လြန္သြားၿပီဆိုတဲ့ သတင္းကိုၾကား ၾကားခ်င္းမွာ သူမခံစားလိုက္ရတဲ့ခံ စားခ်က္ေတြကို မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ေျပာျပလာတဲ့ ေဖြးေဖြး….
ပရိသတ္ႀကီးေရထပ္ဆင့္အကယ္ဒီ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး ေဖြးေဖြးကိုေတာ့အထူးအေထြမိတ္ဆက္ ေပးစရာမလိုေအာင္ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္..။ ေဖြးေဖြး ကေတာ့အႏုပညာမွာတမူထူးျခားမႈေတြနဲ႕အတူ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈေတြကို ရရွိထားသူပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
ေဖြ းေဖြးက နိုင္ငံေရး ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ၅၀၅ (က) နဲ႕ဝရမ္းထုတ္ခံရတာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန ရတာပါ..။ မိသားစုနဲ႕ ေဝး ရာမွာ ေရာက္ရွိ ေနရခ်ိန္ ေဖြးေဖြးရဲ႕ အခ်စ္ဆုံး မိသားစုဝင္ျဖစ္တဲ့ အဖြားရဲ႕ နာေရး သတင္းကစလို႔ ၾသဂုတ္လ(၁၉) ရက္ ေန႕မွာလည္း ဖခင္ျဖစ္သူရဲ႕နာေရး သတင္းဟာ ေဖြးေဖြး အတြက္ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ ျဖစ္ေစမယ္ ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲေနာ္..။
Previous Article ဇနီးနှင့်သားလေးကိုပါ လွတ်မြောက်‌နယ်မြေထဲခေါ်လာခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
Next Article ဖွေးဖွေးရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ထပ်တူစိတ်မ ကောင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အားပေးစကား ပြောလာခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်….